Ywar Thar Lay (YTU): 11/1/14
ငယ်အိပ်မက်ထဲက မြို့ဟောင်းဆီသို့ (၅)
ဂိုက်က ရေတံခွန်နဲ့ ကာကေမြို့ဟောင်း တနေ့တာခရီးတခုခု ရွေးပါလို့ ပြောလာတဲ့အခါ ကာကေမြို့ဟောင်းကို ရွေးဖြစ်တယ်။ တကယ်တမ်းသွားချင်တာတော့ နှစ်နေရာလုံးပါ။ ကျနော်ပေးနိုင်တဲ့ ငွေကြေးပမာဏရယ်၊ ဂိုက်ပေးနိုင်တဲ့အချိန်ရယ်ပေါ်မှာ မူတည်ပြီး တခုကိုပဲ ရွေးခွင့်ရတယ်။ ကာကေကနေ ပါရပ်ဘီဟာဆီုတဲ့ နာမည်ကျော်ဘုရားကိုသွားချင်လှပါတယ်။ အခြေအနေမပေးတာက ယိုးဒယားနဲ့ စစ်ပွဲအသေးစား ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မို့ သွားဖို့ အခွင့်မရခဲ့ပါဘူး။
မနက်စောစော ဟိုတယ်ကနေ ထွက်လာခဲ့တယ်။ ထုံးစံအတိုင်း သူတို့ဆီက လမ်းတွေဟာ ဖြောင့်ဖြူးလို့။ လမ်းဘေးက မြို့ငယ်၊ ရွာငယ်လေးတွေကို ဖြတ်တဲ့အခါ မြန်မာပြည်ကို လွမ်းဆွတ်ခြင်းက ပျံ့နှံ့စိမ့်ထွက်လာတယ်။ မွန်ပြည်နယ် ကျိုက်ထီးရိုးကိုသွားတဲ့ လမ်းနဲ့ အတော်လေးဆင်ပါတယ်။ ဈေးလေးတခုကိုပါ ဝင်ပြီး ဓါတ်ပုံရိုက်ခဲ့တယ်။ ကျနော်တို့ ဆီက ဈေးနဲ့ တော်တော်လေးတူတာမို့ အိမ်ကို ပြန်ရောက်သွားသလားတောင် အောက်မေ့ရပါတယ်။
၁နာရီကျော်လောက်မောင်းတောက်လျှောက် မောင်းလာပြီးတဲ့နောက် ကားသမားနဲ့ ဂိုက် မနက်စာစားဖို့ လမ်းဘေးဆိုင်တခုမှာ ရပ်တယ်။ ဂိုက်က မင်း ကားပေါ်မှာ နေချင်နေခဲ့နိုင်တယ်ဆိုတယ်။ ကျနော်က ဒေသခံတွေနဲ့ ရောနှောရတာမျိုးကိုကြိုက်တယ်လို့ ပြောလိုက်တဲ့အခါ လိုက်ခဲ့ပါလို့ခေါ်တယ်။ လမ်းဘေးလက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကလေးမို့ သန့်ရှင်းရေး အဆင်မပြေဘူးလို့ ပြောတဲ့အခါ ကျနော်က ပြုံးလိုက်မိတယ်။ သိပ်မကွာပါဘူးကွာဆိုတဲ့ အပြုံးပေါ့။ သူတို့က မနက်စာစားကြမှာမို့ ကျနော်ရော တခုခုစားချင်သေးသလားဆိုတော့ ကွေ့သယိုနဲ့ကော်ဖီလို့ ပြောမိတယ်။ စားမှာသေချာတယ်နော်လို့ စိတ်မချတဲ့လေသံနဲ့ထပ်မေးတယ်။ အားရပါးရ စားပြတဲ့အခါမှ သူ့ခမျာ သူ့မနက်စာကို ကောင်းကောင်းစားတော့တယ်။ ဒီလေးနဘမ်းဆိုင်လောက်ကတော့…
တိုးဂိတ်တခုကိုဖြတ်တဲ့အခါ အပေါ့အပါးသွားချင်သွားလို့ ပြောတယ်။ သန့်ရှင်းသပ်ရပ်နေတဲ့ အိမ်သာတွေဟာ ခရီးသွားလုပ်ငန်းအောင်မြင်နေတယ်ဆိုတဲ့ ပြယုဂ်တခုပဲ။
ကာကေဟာ အေဒီ၉ရာစုနှစ်က မြို့တော်တခုပါ။ စေတီပေါင်းများစွာ ဆောက်လုပ်ခဲ့ပေမယ့် စနစ်တကျပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းမရှိတော့တဲ့ နေရာတခုဖြစ်နေခဲ့ပြီ။ ဂိုက်ရဲ့ရှင်းပြမှုအရဆို ဘာသာရေးစစ်ပွဲတွေနဲ့ မြို့တော်ကို ဆီယမ်ရိမရွှေ့ခင်မှာ ဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့ပုံရတယ်လို့ ဆိုတယ်။ တကယ်လည်း အထည်အဝံ့ရှိခဲ့တဲ့ နေရာတခုဟာ အခုအချိန်မှာ မှေးမှိန်ပျောက်ကွယ်လို့နေခဲ့ပြီ။ စေတီပျက်များ ၊ မြေကြီးထဲမှာနစ်မြုပ်နေပြီး မမြင်တွေ့နိုင်သော ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်တွေ အများအပြားရှိနေဆဲ။ တချို့သောအဖိုးတန်အမွေအနှစ်တွေကတော့ တဦးတယောက်တည်းပိုင်ပြတိုက်တွေ၊ ကမ္ဘာအနှံ့မှာ ရောင်းချခြင်းခံရတဲ့ တရားမဝင် ကုန်ပစ္စည်းတွေဖြစ်လို့နေခဲ့ပြီ။
ဒါ့အပြင် အချို့သောနေရာတွေမှာ ပြည်တွင်းစစ်ရဲ့ အကြွင်းအကျန် မြေမြုပ်မိုင်းများ ကျန်ရှိနေသေးတယ်။ အမျိုးမျိုးသော အကြောင်းတွေကြောင့် ကာကေဟာ လာရောက်လည်ပတ်သူ နည်းပါးနေတတ်ပါတယ်။ အေးအေးဆေးဆေး လည်ပတ်လိုသူတွေအတွက်တော့ ကာကေဟာ လူစည်ကားတဲ့ အန်ကောဝပ်ကနေ ထွက်ပြေးလို့ရတဲ့ နှစ်နာရီကြာ အကွာအဝေး လက်တကမ်းမှာပါ။
ကာကေမှာ အထင်ကရ ကျန်နေသေးတာကတော့ ပါရာဆပ်သွန်နန်းဦးဘုရားပါ။ ကျုံးတွေမုခ်ဦးတွေကို ဖြတ်ပြီးတဲ့အခါ မြင်ရတဲ့အရာက ပိရမစ်ပုံစံ ခုနှစ်ဆင့်အဆောက်အဦးဖြစ်ပြီး အောက်ခြေအုတ်ဖိနပ်ကတင် ကျနော့တရပ်မက မြင့်နေခဲ့တယ်။ ကြီးမားတဲ့အခုလို အဆောက်အဦးကြီးကို ဆောက်လုပ်ခဲ့တဲ့ ရှေးဗိသုကာပညာရပ်ဟာ အံ့သြစရာမကောင်းဘူးလား။ ယခင်က အပေါ်ထိတက်လို့ ရပေမယ့် စနစ်တကျထိန်းသိမ်းပြုပြင်မှု မရှိတာကြောင့် ပျက်စီးသည်ထက်ပျက်စီးလာတာမို့ ယခုအခါအပေါ်ကိုတက်လို့ မရတော့ပါ။ တက်ပြီးကြည့်လိုက်ရင် ကာကေမြို့တခုလုံးကို အပေါ်စီးကနေ မြင်ရမှာ..အခုတော့....
တခြား ဘုရားငယ်လေးတွေကိုပါ လျှောက်ကြည့်ဖြစ်တယ်။ အပြိုအပျက်တွေကများသလို မြေမြုပ်မိုင်းသတိပေးဆိုင်းဘုတ်တွေလည်း ဟိုတစ ဒီတစ။
ပုဂံကလို ဈေးရောင်းသူတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဂိုက်ဆီကနေ ကျနော် သင်ထားတဲ့ စကားတခွန်းက " သေအော ကွန်" ကျေးဇူးတင်ပါတယ် မလိုပါဘူးလို့။ ပြီးတော့ ဒေသခံလို အယောင်ဆောင်နေလိုက်တဲ့အခါ သူတို့တွေ မသိလိုက်မသိဖါသာ လိုက်မရောင်းကြတော့ဘူး။ သူတို့ ဆီက ဘုရားပရဝုဏ်သန့်ရှင်းရေး လုပ်တဲ့သူတွေရဲ့ လစာဟာ တလကို ယူအက်စ် ၉၀ဆိုတယ်. လောက်ငှပါ့မလား မသိဘူးနော်။
ကာကေကနေ ပြန်ထွက်လာတဲ့အခါ ဘန်မီလာ (ကြာပန်းရေကန်)ဘုရားကို ဝင်တယ်။ အပြိုအပျက်တွေက များသလို ကြီးမားကျယ်ပြန့်တဲ ဘုရားပရဝုဏ်တလျှောက် သစ်သားလျှောက်လမ်းတခုကို စနစ်တကျ လုပ်ထားတာ ဧည့်သည်တွေအတွက် အတော်လေးကောင်းပါတယ်။
ဘန်မီလာဟာ အနုသုခုမစုဝေးရာနေရာတခုပါ။ ဗိရှနု၊ ရှိဗားနဲ့ ဗုဒ္ဓ ရုပ်ထုတွေကိုတွေ့နိုင်သလို ရာမယဏဇာတ်တော် အခင်းအကျင်းကိုလည်း တွေ့နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ အပျက်အစီးတွေကြားကတောင် ဒီလောက် ခမ်းနားနိုင်သေးရင် ဟိုအရင်တချိန်ကဆိုတဲ့ အရာဟာ အရာအထောင်မကအောင် ကြီးကျယ်မှာ အသေအချာပါပဲ။
ဆီယမ်ရိမြို့တော် အန်ကောသွန်တည်ဆောက်စဉ် အသုံးပြုတဲ့ သဲကျောက်တုံးတွေကို ဘန်မီလာကနေ ရေမြောင်းတခု ဆောက်လုပ်ပြီး ပို့ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ အထောက်အထားအများရ သိရှိရပါတယ်။ ဘန်မီလာဟာ နွံအိုင်ထဲက ကြာတပွင့်ပါ။ ပျက်စီးမှုတွေအများအပြားကြားကနေ သူ့အလှတရားကို ပွင့်ပြရင်း ခရီးသည်တွေရဲ့ စိတ်အာရုံကို ညှို့ယူထားနိုင်နေဆဲ.......
Posted by ywartharlay-ytu at 9:16 PM0comments Links to this post
Labels: Camobdia, အမှတ်တရ ဘဝခရီး
ငယ်အိပ်မက်ထဲက မြို့ဟောင်းဆီသို့ (၄)
အန်ကောဝပ်ကနေထွက်လာတဲ့အခါ ဓါတ်ပုံတွေထဲမှာ အများအပြားတွေ့ရတဲ့ ဘေယွန်မျက်နှာများဆီကို သွားဖြစ်တယ်။ ၁၂ရာစုနှောင်းပိုင်း ၁၃ရာစု အစောပိုင်းမှာတည်ထားခဲ့တဲ့ ဘေယွန်က ဗုဒ္ဓဘာသာအဓိကဖြစ်ပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာ ဘာသာရေးရောယှက်မှုတွေ ဝင်လာခဲ့တယ်။
နံရံပန်းချီကားတွေအတွေနဲ့ အရှေ့ဖက်မှာ ကြည်းတပ်စစ်ချီလာတဲ့ပုံ တောင်ဖက်မှာ ရေတပ်ပုံစသည်ဖြင့် စစ်အင်အားကို ပြထားတာတွေ့ရတယ်။ ပန်းချီကားတွေကနေ ချမ်းပလူမျိုးတွေနဲ့ ကူးလူးဆက်ဆံနေပုံတွေ တွေ့ရခြင်းဖြင့် ဒီပန်းချီကားတွေဟာ တကယ့်သမိုင်းကို ပြောပြနေနိုင်ခဲ့တယ်။
မျက်နှာတွေကို နှစ်ဖက်ဒါမှမဟုတ် လေးဖက်လေးတန် တွေ့ရမှာဖြစ်ပြီး အဲ့လိုမျိုး ၄၉ခုရှိခဲ့ပုံရပေမယ့် အခုအခါ ၃၇ခုပဲ ကျန်ရစ်ပါတော့တယ်။ စုစုပေါင်း မျက်နှာအရေအတွက် ၂၀၀ရှိသော်လည်း တချို့မှာ အပြည့်အစုံအဖြစ် မရှိနိုင်တော့တာ နှမြောစရာပါ။ တဆက်တည်း ထုလုပ်ထားတာမျိုးမဟုတ်ပဲ အထပ်လိုက်ကျောက်တုံးတွေနဲ့ ဒီမျက်နှာ ၂၀၀ကို ဘယ်လိုများ ဆောက်လုပ်ခဲ့ပါလိမ့်…
ဘေယွန်ကနေကျော်လာတဲ့အခါ ဘဖွန်ဆိုတဲ့ တောင်ပုံစံစေတီကိုသွားဖြစ်တယ်။ အဆောက်အအုံကို ရောက်ဖို့ လျှောက်ရတဲ့ တံတားရှည်ရှည်ကနေတင် ဟိုအရင်တုန်းက ဆိုတဲ့အတွေးကို တွေးစေမိတယ်။ တံတားအောက်မှ ရေတွေနဲ့ ကြာမျိုးငါးပါးစုံတဲ့ မြင်ကွင်းမျိုးကို စိတ်အာရုံမှာ ဖြတ်ကနဲပေါ်တယ်။ ၂၀ရာစုလောက်ကစလို့ ပျက်စီးမှု ကြီးကြီးမားမားရှိနေခဲ့ပြီး ပြင်သစ်ပညာရှင်တွေနဲ့ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုတွေ လုပ်နေခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ သေချာတက်ရောက်ကြည့်ရှုခွင့် ပိတ်ထားတာမို့ ရသလောက်တော့ တက်ကြည့်ခဲ့သေးတယ်။
အနားဝန်းကျင်က ဘုရင့်ပန်းခြံတော်ကိုလည်း ပတ်ကြည့်ဖြစ်တာပေါ့။ ရေကန်တွေနဲ့ ဘုရင်အပန်းဖြေတယ်ဆိုတဲ့ အဆောက်အဦးရဲ့ အပေါ်ဆုံးအထိကိုတက်ကြည့်ခဲ့သေးတယ်။ အပေါ်စီးကနေ လေသာပြတင်းကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါ သားသမင်တွေ၊ ပန်းမာန်တွေနဲ့ စိမ်းလန်းစိုပြေနေတဲ့ ပန်းခြံကို သူသေချာပေါက် ငေးနေခဲ့မှာပါ.
ပန်းခြံကိုဖြတ်ပြီး ဗိုလ်ရှုသဘင်အဖြစ် ဆောက်ထားတဲ့ ဆင်ခံဗိုလ်ရှုသဘင်ကို သွားတယ်။ နှစ်မီတာခွဲအမြင့်နဲ့ မီတာသုံးရာကျော် ရှည်လျားတဲ့ ဒီဗိုလ်ရှုသဘင်တလျှောက်မှာ အရုပ်တွေအရုပ်တွေဆိုတာ တန်းစီနေတာပဲ။ ဘုရင်က အဲ့ဒီဗိုလ်ရှုသဘင်ကနေ တပ်တွေချီလာတာ၊ ကချေသည်တွေ ဖျော်ဖြေတာကို ကြည့်လေ့ရှိသတဲ့လေ။
ထမင်းစားနားပြီးတဲ့အခါ တုပ်တုပ်ဆရာနဲ့ ကျနော် နှစ်ယောက်တည်း မရောက်ဖြစ်သေးတဲ့ ဘုရားတွေကိုပတ်တယ်။ မိုးရွာလာတာမို့ ခဏပဲသွားနုိုင်ပြီး ဟိုတယ်ကိုပဲပြန်နားဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တနေ့ ကာကေမြို့ဟောင်းကို သွားဖုို့ စောစောလာခေါ်မယ်လို့ပြောထားတာမုို့ ညဖက် အပြင်မထွက်ဖြစ်တော့ပါ....
Posted by ywartharlay-ytu at 1:30 PM0comments Links to this post
ငယ်အိပ်မက်ထဲက မြို့ဟောင်းဆီသို့ (၃)
တကယ်တမ်း အရောက်ချင်ဆုံး နေရာကို ရောက်တော့ မနက်လေပြည်လေနုလေးတွေ ဆော့ကစားတဲ့အချိန်မှာပါ။ အဝင်ပေါက်ကနေ ကြည့်ရတာနဲ့တင် ခမ်းနားကြီးကျယ်မှုဆိုတာကို မြင်ရတယ်။ ပြိုပျက်နေတဲ့ အရုပ်တွေ၊ ကျုံးကိုဖြတ်ကူးတဲ့ တံတားက တခြမ်းပျက်နေတာတောင် အကျယ်ကြီးကျန်သေးတာ။
ဘုရားပရဝုဏ်ဟာ ကြီးမားကျယ်ပြန့်လွန်းတယ်။ ကျုံးကိုလည်း လုပ်ထားလိုက်တာ စင်္ကာပူက မြစ်ထက်တောင်ကျယ်သေးတယ်။ အဝင်ဝကနေ လျှောက်လိုက်ရတဲ့ခရီးဆိုတာ။ ကမ္ဘာအနှံ့က ခရီးသွား ဘုရားဖူးတွေဟာလည်း အဖွဲ့လိုက်ပြန့်ကျဲလို့။ ခရီးတဝက်လောက်မှာ ထန်းပင်ငယ်နဲ့အတူ ထန်းရည်တွေ မြင်ရတော့ ကိုယ့်အညာမြေကို သတိရပြန်ရော။
ကျနော့ကို တမုဟုတ်ချင်း ဖမ်းစားသွားတာတော့ အလျားလိုက် စီတန်းပြီး ရှိနေတဲ့ နံရံပေါ်က အရုပ်တွေပါပဲ။ ဒီအရုပ်တွေက ဟိန္ဒူရာဇဝင်ထဲက စစ်ပွဲတွေဆိုပါတယ်။ စစ်ဖြစ်ကြတဲ့ အရုပ်တွေဖြစ်လို့ အချင်းချင်း သတ်ဖြတ်နေတာတွေ၊ လူတွေ၊ နတ်တေ၊ွ ငှက်တွေ၊ သတ္တဝါပေါင်းစုံနဲ့ လူ့ပြည်က သေတဲ့အခါ ငရဲပြည်ကို ဆင်းသွားတာမျိုးအထိတောင်ပါတယ်။
နတ်တွေနေတဲ့ တောင်အလား ဖန်ဆင်းထားတယ်ဆိုတဲ့ အန်ကောဝပ်ရဲ့ တည်ဆောက်ပုံကတော့ စာဖွဲ့လို့ မမှီလောက်ပါဘူး။ ပထမဆုံး အနောက်နိုင်ငံသားဘုန်းတော်ကြီးကတောင် ခမာတွေ တည်ဆောက်ထားတယ်ဆိုတာ မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင် အချိုးအစားကျန လှပလွန်းတယ်လို့ ထောပနာပေးခဲ့တာ မဟုတ်လား။ ဟိန္ဒူဘာသာနဲ့ အတူ ဗုဒ္ဓဘာသာပါ နောက်ပိုင်းမှာ ရောယှက် လာခဲ့တယ်လို့ သမိုင်းကတော့ဆိုပါတယ်။ အဆောက်အအုံပုံစံကတော့ တကယ့်ကို ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်းပုံဖြစ်ပြီး ဗောရောဗုဒ္ဓေါရယ်၊ ပါရာဘန်နန်းက တည်ဆောက်ပုံ၊ အရုပ်တွေဟာ တူသလောက်နီးပါးကို ရှိတယ်။ သဲကျောက်ကို ထွင်းထုဆောက်ထားတာခြင်းလည်း တူတယ်။ တကယ်တမ်း အန်ကောဝပ်က ၁၂ရာစုမှဆိုတော့ နောက်ကျမှတည်တာပဲဖြစ်တယ်။ အဲ့ဒီခေတ်ကို ပြန်လိုက်ကြည့်တဲ့အခါ Majapahit အင်ပိုင်ယာ ကြီးစိုးခဲ့တဲ့ ခေတ်အခါကလို့ မှန်းဆနိုင်တယ်။
အလယ်က အမြင့်ဆုံးကျောင်းဆောင်ကို တက်မယ်ဆိုရင် ဦးထုပ်ဆောင်းခွင့်မပြုပါဘူး။ လက်ယမ်းကို ဆွဲပြီး မတ်လှတဲ့ လှေကားကို တဖြည်းဖြည်းချင်းတက်နိုင်တယ်။ လေကလည်း တဟူးဟူးတိုက်နေတာမို့ အပေါ်ကိုရောက်မှပဲ တဖြည်းဖြည်း အမောပြေလာနိုင်တယ်။ ရှေးတုန်းက ဘုရားအဆူဆူတိုင်းဟာ လှေကားကို မတ်နေအောင် တည်ထားတာ ဘာကြောင့်ပါလိမ့်ပဲ….
ဘုရားရင်ပြင်တော်ပေါ်က ဘုန်းကြီးတွေရဲ့ သင်္ကန်းအရောင်ဟာ ကျနော့အတွက်တော့ အတော်လေး အမြင်ဆန်းတယ်။
ရင်ပြင်တော်ပေါ်က အရုပ်တွေ အတော်များများဟာ ကချေသည်တွေချည်း။ သူ့ခေတ်အခါက အနုပညာကိုပဲ ဦးစားပေးလေသလား။ အကသင်တန်းကျောင်းတခုကို ဝင်ကြည့်တဲ့အခါ ငယ်ငယ်ကတည်းက ခမာ အကကို စနစ်တကျ သင်ကြားပေးနေတာကို တွေ့ခဲ့ရတယ်။ ကဟန်တွေကိုတော့ ဒီနံရံတွေဆီကပဲ စုတုပြုကြပုံပါ..
ဒီကျောင်းတဝန်းလုံးမှာ သွားပေါ်အောင် ပြုံးပြီးကနေတဲ့ ကချေသည် ရုပ်ဟာ ဒီတရုပ်ပဲရှိသတဲ့။
နောက်တခုက ခမာအမျိုးသမီးတွေ အသက်ကြီးလာတဲ့အခါ အထက်ပုံထဲကလို အ၀တ်ဖြူဝတ်၊ ကတုံးတုံးပြီး မယ်သီလရင်လုပ်သတဲ့။ ဘုရားကျောင်းတွေမှာ အခုလို အမျိုးသမီးကြီးတွေကို တွေ့လို့ ကျနော်က မေးတဲ့အခါ ကျနော့ကို အဲ့လိုပဲရှင်းပြပါတယ်။
အန်ကောဝပ်ကထွက်လာတော့ ခမာ သတို့သား သတို့သမီး မင်္ဂလာဆောင် ဓါတ်ပုံလာရိုက်တာနဲ့ ဆုံတယ်။ သတို့သား၊ သတို့သမီးတင်မက သတို့သမီးအရံလေးတွေကိုပါ ရိုက်ခွင့်ပေးပါဆိုပြီး ရိုက်လာခဲ့တယ်။ ခေတ်သစ် ရိုးရာဝတ်စုံကလည်း အဆန်းတကြယ်.
ထွက်လာပြီဆိုတော့ နောက်ဆံတတင်းတင်းနဲ့ ပြန်ကြည့်မိပြန်တယ်..ရှေ့က အစောင့် ခြင်္သေ့ရုပ်ကြီးတွေနဲ့အတူ တချိန်က ဘယ်လောက်တောင် စည်ကားခမ်းနားခဲ့တဲ့ အတိတ်…..
အရှေ့မှာ အဲ ပေါင်းတင်း တွေပါလား….
Posted by ywartharlay-ytu at 10:00 PM0comments Links to this post
ကျနော်နဲ့ ဂျိုဂျကာတာ (၇)
ကျနော်နဲ့ ဂျိုဂျကာတာ (၆)
ကျနော်နဲ့ ဂျိုဂျကာတာ (၅)
ကျနော်နဲ့ ဂျိုဂျကာတာ (၃)
ကျနော်နဲ့ ဂျိုဂျကာတာ (၂)
ကျနော်နဲ့ ဂျိုဂျကာတာ (၁)
အမှတ်တရ ဘဝခရီး (191)